Tsy fantatro ny vehivavy hafa raha toa ahy, fa isaky ny miditra eo amin'ny faha-5 hatramin'ny faha-7 volana ny kiboko, rehefa bevohoka, dia tena mora « excitée » be mihitsy aho
Telo izao ny zanako, fa toy izany foana ny zava-miseho. Tamin'izaho bevohoka ny zanako fahatelo, dia nandeha “mission” tany amin'ny faritany ny vadiko. Izaho anefa amin'io amin'ilay mientana amin'ny zavatra tsisy dikany. Nandeha nisafo aho, teo amin'ilay faha-enina volana iny. Somary nanana olana kely aho, satria marary be foana ny takibako. Nasain'ilay “gynécologue”, izay marihiko fa lehilahy, naboridana ny tapany ambany, fa tsy maintsy ho –“toucher”-na, sao misy olana amin'ny vozon'ny tranon-jaza. Vao nanokatra ny taovam-pananahako anefa ilay dokotera, dia efa nahatsiaro hafanana niakatra be aho tao anaty kiboko tao. Rehefa nanofoka ny tanany tany amin'ny lalan-jaza izy, dia nihamando hatrany aho. Rehefa niala avy tao ny tanany, dia nahasafo tsy nahy ny “clitoris”. Nikiaka tampoka aho, taitra ilay dokotera ary nanontany izay mahazo ahy. Nivoara-mena fotsiny aho, fa tsy nahavaly. Izy kosa, nitsiky somary naneso kely. Rehefa hody aho, dia nilaza izy hoe : “tsy mahamenatra izany, fa tsy ianao irery no vehivavy efa tratran'izany”. Fantany izany fa nanainga mafy ny filàko ilay kitika tsy nahy nataony. Vao mainka aho nivoara-mena...